Akụkọ - Taa, a kpọrọ Maoheng Machinery ka o sonye na ngosipụta nri ma zute ọtụtụ enyi nwere ike ịkwado.
Anyị nwere ndị ọrụ aka ọrụ nwere afọ iri na isii nke imepụta na ahụmịhe mmepụta, nke nwere ike ịnye atụmatụ nyocha mkpụrụ ọka zuru ezu maka ịmebe omenala.
Companylọ ọrụ nwere asambodo patent ise maka akụrụngwa. Na site na-aga n'ihu mma na ahịa, e n'ọtụtụ ebe ghọtara na otuto site ahịa.
Dịka nhọrọ ndị ahịa chọrọ maka ihe dị iche iche. Anyị nwere atụmatụ nyochara akụrụngwa maka ịhazi ọka wit ọka, soybean sorghum, chickpeas, agwa uhie, mkpụrụ osisi sesame, ahụekere, rapeseed, mkpụrụ chili na ihe ndị ọzọ.
Anyị ga-eme ike anyị niile iji weta ngwaahịa ma mee ike anyị niile iji jeere gị ozi.Maoheng Machinery nwere ike ibunye: Ngwakọta igwe na-ehicha igwe na ihu igwe ikuku abụọ na tebụl nnukwu ike (ọka wheat, osikapa awnner, sorghum sheller), Ngwa igwe eji ekpocha ọka ihuenyo ikuku na nnukwu mpo, mkpụrụ ikuku nhicha igwe, nnukwu ikewapụ igwe (nrụgide dị mma, nrụgide na-adịghị mma), igwe nhicha belt, magnetik separator, magnetik de-soiler, bọket mbuli, conbeyor, mkpụrụ mkpuchi igwe, de-stoner, agwa polishing igwe, ájá mkpoko, nnukwu mpo table, agwa grader, bagging ọnụ ọgụgụ usoro, wdg
Ntak emi Họrọ maoheng:
1.ozuru asambodo njikwa njikwa ISO9001 na asambodo AAA larịị nke ụkpụrụ omume ọma.
2.Adopting elu n'ibu akpaaka na smartization kama omenala ntuziaka ọrụ na-azọpụta ọrụ na-eri na ukwuu mma mmepụta arụmọrụ.
3. Igwe ahụ kwekọrọ n'ụkpụrụ ergonomic, iji oge na oge nchekwa ike, ọrụ dị mfe na ngwa ngwa.
4.Safety nchedo, igwe ya onwe ya na leakage nchedo, mma ọrụ na ojiji.
5.Quenching processing technology, melite ekweghị ekwe, ike nke metal workpiece, ike ikike nke mkpakọ na corrosion eguzogide, melite ọrụ ndụ nke akụrụngwa.
6.Focus na ahịa ina-agba mbọ ka ndị na-ewu nke "ụlọ ọrụ-mahadum-nnyocha" na ọhụrụ usoro.
Post oge: Sep-23-2019